Naghachi faịlụ site transformer USB Drive
Transformer USB Drive Iweghachite - Naghachi faịlụ site transformer USB Drive
> Resource> Flash Drive> transformer USB Drive Iweghachite - Naghachi faịlụ site transformer USB Drive
Olee Otú M Pụrụ Naghachi Data si transformer USB Drive?
My eyen mesoo m transformer 4GB USB mbanye dị ka a ji egwuri egwu. Ọ tụbara ya niile na-elekọta ụlọ na ọdachi mere: ọ e tiwara. Ugbu a, ọ ka nwere ike a ghọtara site na kọmputa m ma m nwere ike imeghe ya. The onwunwe ọmụma bụ 0 byte. M nnọọ nchegbu n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe bara uru foto na ụlọ ọrụ akwụkwọ na ya. Nwere ike onye ọ bụla na-eche si ihe echiche ka m ga-esi m data azụ? Ekele.
Ọ bụ n'aka na gị transformer USB mbanye na-emerụ na ị ga-enwe ike iji nweta data na ya. Nke bụ eziokwu bụ na gị na chọrọ nwere ike mfe enweta n'ihi na ọ ka nwere ike-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị. Lee, m ga-akwado a data mgbake omume n'ihi na ị na weghachite data si transformer USB mbanye: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Ngwá ọrụ a na-enye ihe ngwọta kasị mma iji weghachite furu efu, ehichapụ, formatted ma ọ bụ ọbụna mebiri emebi faịlụ gụnyere foto, akwụkwọ faịlụ, ọdịyo faịlụ na videos si gị transformer USB mbanye. N'ihi na gị ikpe, nke bụ a "Gụọ Error", nke a mmemme zuru okè mmekọ.
Download ikpe mbipute ike iṅomi gị transformer USB mbanye nke mere na ị nwere ike ịlele ma Wondershare Data Recovery aka n'ezie ma ọ bụ.
Igosi transformer USB Drive Iweghachite
Ka na-Windows version dị ka ihe atụ. Mac ọrụ biko gụọ Mac version ndu ebe a: Wondershare Data Recovery for Mac ọrụ ndu.
Nzọụkwụ 1 Họrọ Iweghachite ọnọdụ na Malite transformer USB Drive Data Recovery
Na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery na kọmputa gị na ị ga-ahụ atọ mgbake ụdịdị egosipụta na mmalite interface. Biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" nọgide na.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-eji usoro ihe omume nke oge mbụ, usoro ihe omume ga-on "Ọkachamara mode"-akpaghị aka. Nke a mode nwere dị iche iche ọrụ interface. Ị mkpa ka ịgbanwee gaa na "Ọkọlọtọ mode" na mmalite interface.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị transformer USB Drive anya n'ihi na Lost Files
Ugbu a usoro ihe omume ga-egosi niile ike draịva na PC gị na, gụnyere otu maka gị transformer USB mbanye. Họrọ mbanye akwụkwọ ozi nke ya na pịa "Malite" na-amalite iṅomi.
Rịba ama: "Kwado Deep iṅomi" bụ maka ọrụ onye na-adịghị ya chọta furu efu faịlụ na nkịtị iṅomi. Ọ na-ewe ogologo oge.
Nzọụkwụ 3 weghachite Data si transformer USB Drive
Mgbe ahụ faịlụ ga-edepụtara dị ka edemede mgbe Doppler, dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru. Ị nwere ike ele faịlụ aha ego otú ọtụtụ faịlụ na ị ga-enwe ike iji weghachite, na i nwere ike ihuchalu oyiyi kwa.
Mgbe marking faịlụ mkpa ka ị gbakee, ị nwere ike pịa "Naghachi" na-ezipụta a ọnọdụ gị na kọmputa na-ịzọpụta Natara faịlụ.
Rịba ama: N'ihi na faịlụ nchekwa, biko adịghị zọpụta faịlụ azụ gị transformer USB mbanye.
Olee otú Naghachi Data mgbe USB Format Error
Nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu nkebi a flash mbanye
Best ngwọta ịrụzi gị flash mbanye